Isnye Bu Uche? | RayHaber | raillynews
HomeGeneralIsnye Bu Uche?
21 / 05 / 2020 General, Onye bu onye
onye nwere obi miri emi
Zihni Derin (amụrụ 1880, Muğla - ụbọchị nke ọnwụ Ọgọst 25, 1965, Ankara), onye agronomist Turkish, onye nkuzi. Mmanụ tii na Turkey butere nnabata na ịgbasa; A maara ya dị ka “nna tii”.
Amuru ya na Mugla na 1880. Nna ya bụ Mehmet Ali Bey, onye ezinụlọ Kuloğulları nke Muğla. Ğlọ akwụkwọ sekọndrị nke Muğla na 1897, Schoollọ Akwụkwọ Ọrụ Ugbo na Tesalonaịka na 1900, 1904 Halkalı Ọ gụsịrị akwụkwọ na School of Agriculture. N'afọ 1905, ọ malitere ịrụ ọrụ dị ka onye ọrụ bekee yana ọrụ dị na Aydın Province Forest na Nnyocha Nnyocha Mac.
Ọ ghọrọ onye na-enyocha ọhịa na 1907 mgbe ọ rụsịrị ọrụ dị ka Onye Nnyocha Ulee Ọhịa na Rhodes (nke a maara ya dị ka Algeria-i Bahr-i Sefid Province) Onye Nnyocha Ọhịa, Cedik, Gediz na Simav.
Ọ rụrụ ọrụ dị ka onye na-amụ kemịkalị, na ọrụ nkà na ụzụ na ihe ọmụmụ ala na lonlọ Akwụkwọ Ọrụ Ugbo na Tesalonaị site na 1909 ruo 1912. Ọ lụrụ Maide Hanim na Tesalonaị na 1911; Ọ mụrụ ụmụ atọ site na alụm di na nwunye a.
Ọ rụrụ ọrụ dịka onye nkuzi na Bursa n'agbata afọ 1914 ruo 1920 wee rụọ ọrụ dị ka onye osote onye isi nchịkwa Bursa National Education.
Ntinye na Mgba Mba
Ọ hapụrụ Bursa obere oge tupu ndị Gris wakporo ya na 1920 wee kwaga Ankara; Ọ ghọrọ onye isi ọhụụ Director nke Ọrụ Ugbo na Ministry of Economy, nke gọọmentị National Struggle guzobere; Ọ nọgidere n'ọnọdụ a ruo mgbe 1924.
Akpa tii bidoro
N'April 1921, ọ sonyere na Ankara dị ka onye nnọchi anya nke Ministry of Economy na kọmitii ndị nnọchi anya ọrụ bịara iji kpaa nsogbu nsogbu akụ na ụba na mmekọrịta ọha na eze nke mba ahụ. Mgbe mgbanwe nke Russia gasịrị, na mmechi nke Batumi, e nyere ya ọrụ nyocha iji mepụta ọrụ ọhụrụ na Eastern Black Sea, ebe nsogbu enweghị ọrụ na nchekwa na-aba ụba. Halkalı Ọ gụrụ akụkọ Ali Rıza Bey, otu n'ime ndị nkuzi nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị Ọrụ Ugbo dere, maka nyocha ya na Batumi na 1917. N'ime akụkọ ahụ, ekwuru ya na ihe kpatara na enwere ike itolite tii gburugburu Rize. Zihni Derin gụrụ akụkọ ụbụrụ nke Ali Rıza nye kọmitii ahụ na Rize, e kpebiri ihiwe ebe ana-elekọta ụmụaka ịmalite ngwa ahụ.
Zihni Bey, onye e zigara ya na Rize na 1923 iji guzobe tii na citrus na-elekọta ụlọ, malitere ịrụ ọrụ na ala ụlọ nwere ụlọ iri na ise na ugwu Garal, nke bụ akụ. Ọ hụrụ na mkpụrụ tii ndị ụfọdụ ndị na-anụ ọkụ n'obi sitere na Batumi wetara ma kụọ dị ka osisi ịchọ mma na mpaghara ahụ toro nke ọma; N'afọ 15, ọ gara Batumi ma nyochaa ebe a na-akọ tii, ụlọ ọrụ tii na ebe a na-eme nchọpụta Astropical Plants Research nke ndị Russia guzobere. O wetara mkpụrụ tii na saplings ọ na-eweta, tii mkpụrụ osisi na ụfọdụ mkpụrụ osisi, achara rhizomes n’ebe a na-elekọta ụmụaka. O kwubiri na ihu igwe na nhazi nke mpaghara dị mma maka ịmị tii. Ọ nwara ibute sacpip na Batumi ma kesara ya ọha na eze, mana mbọ nke mbụ a, nke na-anabataghị ntị zuru oke, kụrụ afọ n'ala.
Zihni Derin, onye laghachitere n'ọkwa ya na Ankara, kwadebere usoro iwu maka okwu a wee kwado iwu ahụ site na nkwado nke Rize Deputies nke oge ahụ na February 6, 1924 wee gụọ 407. Iwu, Rize Province na Borcka Crash; Hazelnut, Oroma, Lemọn, Tangerine, Iwu nke tii bidoro n’okpuru aha Nta.
Laghachi na nkuzi
N'ihi ezighi ezi nke iwu ahụ etinyere na enweghị ihe ọmụma banyere ndị bi n'ógbè ahụ banyere ị ofụ tii, Zihni Bey laghachiri n'ọrụ izi ihe ahụ mgbe a na-egbucha ọrụ ugbo tii. Ọ kuziri ihe n’ụlọ akwụkwọ dị iche iche na Istanbul. Ọ gara n'ihu na-akụzi ihe na Ankara kemgbe 1930.
Mgbe ọrụ ịkụ tii batara ihe a ọzọ n’obodo a, a họpụtara ya ka ọ bụrụ onye na-ahụ maka ndị ọrụ ugbo nke abụọ na Thrace na 1936 na Onye Isi Ndụmọdụ nke Ngalaba Ọrụ Ugbo na 1937.
Na thelọ Ọrụ Ugbo, nke a ga-ehiwe na Rize na gburugburu ya na 1938, aha onye nhazi tii tii rụrụ ọrụ nke ukwuu iji gbasaa mmepụta tea. Mgbe ọ lara ezumike nká n'ihi afọ ole ọ dị na 1945, ọ gara n'ihu na-arụ ọrụ dị ka onye nhazi na Ngalaba Ọrụ Ugbo.
Ọ ghọrọ onye nnọchite anya nọọrọ onwe ya na Rize na ntuli aka ndị 1950; mana enweghị ike ịbanye na omeiwu.
Zihni Derin, onye akpọrọ dịka onye ọbịa dị ka ọbịa maka emume "27th of the Tea" nke a mere na Rize na 1960 mgbe mgbagha ọchịchị nke May 1964, 40, nwụrụ na 25 Ọgọst 1965 na Ankara.
A lere anya na oru ya dika ihe kwesiri onyinye T ServiceBİTAK na 1969.
Ọnye na-bụ Zihni Üner?
Ọwara Eurasia rute ebe kachasịnụ
Narlıdere Metro Line ga-abụ miri ogbi
Onye isi oche Zihni Şahin: Proj Anyị na-aga n'ihu 180 Project Başkan
Mayor Zihni Şahin na-enye 'Oziọma' nke Oziọma na ndị ọrụ nchịkọta onwe ha
TÜDEMSAŞ nyere General Manager Yıldıray Koçarslan
Lütfi Elvan bụ onye ozi ọhụụ ọhụrụ!
Ònye bụ Behiç Erkin
Ọnye na-bụ Nuri Demirağ
RayHaber Onye na Gini mere
Onye bụ Kasım Kutlu
Ọnye na-bụ Admiral Cihat Yaycı?
Ọnye na-bụ Adil Üstündağ?
Ọnye na-bụ Recep Tayyip Erdoğan?
Ọnye na-bụ Sabiha Gökçen?
Ọnye na-bụ Kemal Demirel?